siyaasadda | Cosmos koobi karayn
Posted in geesta . Space dhammaadka lahayn . xoog . lacag . sharciga . Karma . Matrix . dhaqaalaha . ilbaxnimada . boholaha madow
Dhimashada caalamka ka badan waqtiga sameysmi karaa dawlad, siday ay khatar ku tahay jiritaanka Planet oo dhan.
Masters of Planet ee Dhimashada kalsooni, in ay xaq u leedahay oo u baahan in la burburiyo ee la qabtay dadka. Isla mar ahaantaana isu dhaadhiciyo, in sidaas shaqada muqadas ka dhigi.
masuul ka xayawaan sannado badan ka shaqeeya adag si, si loo kordhiyo garaadka heerka iyo heerka sirdoonka ee tacsida ah. Laakiinse waagaas oo dhan awood u fadhiya dhigeysa tallaabooyinka, caqabadaha dhismaha si ay u. In indhihiisa ayay tiri mid ka mid ah (in la horumariyo waxbarashada, caawiyo dadka la dhiso aasaaska Adduun) laakiin indhaha soo gani kaliya ee dib u (“aad tahay xariifnimo aan aniga ahayn – dhiman”). Sida xaq in kiisaska noocaas ah waa daar aad loo jecel yahay: “ilaah, Anigu garan maayo, waxa la ii samaynaya.” Laakiin sharciga khayaalka (taas oo ka koobanahay karaan wax kasta oo fasalka lixaad) “Jaahil ah ee sharcigu waa cudur daaranina”. Maxaa ka dhigay oo dhan eed u xoog rabshad, laakiin aan eed Ilaah hortiisa. Oo kanu waa caddayn toos ah, xoog wanaagsan “waa ogyahay” fala in: Qarsado ay disorder nafsi ah oo adag. (Qodobka. 158-204 UKRF; Qodobka. 205-211, 221-250 UKRB; UCU st.185-198; ca. st.221-224.14. UKSŞA)
inta badan dhimasho on dilaaga meeraha khiyaanayn dadka, mafaahiim quduusan ah mabaadi'da, waxa ay noqotay caado. Waxay waxaa haga sharciyo fudud: “Haddii aad tahay qof wax aad aaminsan tahay – Waxaan u ciyaari doonaa oo dili doonaan haraadiga rumaysadkiinna. Oo aad u yeelan doontaa in Heesta isku mid ah iyo giblets mushrik aniga oo kale! Markaas yimaado universal fursad Sinaanta iyo bahda! Ka dib oo dhan, waxaa jira suurtagalnimada no, Waxaan ahay xariifnimo iyo nadiifiye (maxaa yeelay, ma xiiseynayo), laakiinse anigu waxaan idinku disembowel karaa – had iyo jeer waa lagu soo dhaweynayaa.” (Qodobka. 139-204, 285-338 UKRB 105-157, 205-227 UKRF, 115-184,255-275,293-327 UKU, Qodobka. 210-230, 240-252 UKSŞA)
of meerayaasha Dhimashada Maraykanka garoomada by Power burcad hubeysan. dadka, fahamka xaaladda iyo status quo, aysan suurto gal ahayn in ay shaqo ka dhigi naftaada; Waayo, ku alla kii doonaya inay shaqeeyaan burcadda? sida iska cad, in ay jiraan ma jiro. In this markeeda oggol yahay sharciga iyo xeerarka cilladaysan. Kaas oo la abuuray oo loo isticmaalo oo kaliya hal ujeedo: waxyeelo ama dhaawac dadka dalalka. (Haddii aan ka fiirsan muwaadin shakhsiga ah sida nidaamka xidhan – at khasaaro tamarta gudaha Nidaamka waxay u egtahay in ay soo celiso gobolka hore. In this, waxay isku dayi kartaa inaad tamar ka deegaanka qaadan. Taas oo aan lacag la'aan ah, oo waxaa iska leh awoodda sii yaraaneeyso iyo xuquuqda isticmaalka waxa lagu sharaxay by sharci khayaalka. Laakiin haddii sharcigu ku saabsan yahay khayaalka jabay – moodayay in ay fuliyaan aan khayaal ah, iyo mas'uuliyadaha dhabta ah.) mahad shaqaaqo qorsheysan ku andacoonaya of waafaqsan sharciyada khayaalka – Dhimashada dadka dunida ku sameynayo dhaawac weyn ma khayaalka. Oo dembiga in caalamka ma noqon muuqata – eviscerated deggan kasta si gaar ah go'doonsan: “Bal eega, waxaan soo saaray sharci cusub: Hadda ma aha in aad u noqon!” (Qodobka. 205-245 UKRF, Qodobka. 285-348 UKRB, 185-235 UKU, 220-250 UKSŞA)
Sharciyada si ula kac ah qaabeeyey sida, in “Xildhibaan” Waxa uu ahaa xaq u, Iyo si ula kac ah la la'yahay article “xanaaqii dembi”. Ma aha in lagu daweeyo xaaladaha kuwa, taas oo xoog qasbo muwaadiniinta in ay dambiyo galaan, halkii, ayay sheegtay in, in dhibbanaha waa in la eedeeyo dhaawaca, oon ku keeni iyada xitaa more, dharbaaxo jabiyo. Oo markii dhib kobaha ah waxaa laga rogo galay cawaaqib laami cadaab. Sayidka, sii kordhaya masaafada u dhexeysa Jidka(qalad u gaar ah) iyo saamaynta(Cadaab “Casaaseel”), oon ku dhiso xoog badan cabsi dhamaystiran marka laga fekerayo, in garsoorka uu yahay denbiile. isku sharci keliya oo kaliya “dambiyada ka xanaajiyey” si ammaan ah u gudbiyey in nooc kasta oo dembi ka haysta si uu u jiro. ( Qodobka. 275-360 UKRF, st.356-465 UKRB, 109-114,328-447 UKU, 220-250, 720-814 UKSŞA)
cabsi noolaha, khasaaray, isku dayaya in ay ka heli tacsiyaynta ugu yaraan in ghostly qaar ka mid ah khayaal iyo door bidaan in ay rumaysan yihiin in dhammaan noocyada kala duwan ee warkii, sheekooyin iyo ballamada madhan. Inkastoo, in isbedel dhab ah waa in la sameeyaa waxqabad dhab ah, organisms Kuwani waxay door bidaan is-khiyaano. Oo xushay laba nasiib hoose. Ka dib oo dhan, sida xaqiiqada ah si fiican, marka aad dilo gaabis ah, badan marka aad si degdeg ah u dilaan. Oo runta ku Qarsoon khadadka… (Qodobka. 205-245 UKRF, st.122-138 UKRB, 185-235 UKU, 220-250 UKSŞA)
Burcadda ayaa waxaa si geesinimo leh u dagaalamaya awood maxaa yeelay waxa ay u ogolaanaya inay ku ururto caasimadda ah sumalka uguma, waxaad isticmaali kartaa si ay u iibsadaan codadka ee nus ka mid ah dalka, ku yaal ayaa qarka u saaran marxalad qarnigii qashinka oo caag ah. Iyo awood this waa ay awoodaan in ay wax lacag ah ku qaataan waxa on, si ay u sii jagooyinka iyaga u gaar ah, maxaa yeelay, in ay dhacdo guul la celin doonaa kharashka ku celcelis ah, gaar ahaan tan iyo dadaal ku bixisay on lacag ururinta si kastaba shisheeyayaal. (Qodobka. 169-204 UKRF, Qodobka. 221-265 UKRB, 199-254 UKU; razd.7,10,12,13 UKSSHA)
Suurtagalnimada halganka awood guud ahaan waa gaar ah dhacdo: sababtoo ah haddii aad la abuuro shuruudaha ku haboon – wejiyadooduna waxay u tusaan, kuwaas oo horey u toogtay kale ee dhabarka. Tani waxay abuurtaa fursad si loo caddeeyo meelaha la hubin “buro kansar”.
tartanka siyaasadeed on Geeri meeraha badan yahay sida eey oo meeshu a fanaaniinta majaajilada Shutov. Dogs ciyi at midba midka kale, laakiin dhan ka dhisan ay clownish bixiya ee breeders isla. (Qodobka. 165,178,184,185.5,169-204 UKRF; st.247,253,257,232-262 UKRB, 228,225,199-235 UKU; razd.7,10,12,13 UKSSHA )
“ceeryaamo” teknoolajiyada ogolaan noolaha in ay sii shaqaynaya si caadi ah oo ka hooseeya “albaaka dareen”. Haddii noolaha spineless Barya xubnaha taranka – waxay siinaysaa awood dheeraad ah in ka badan awoodin in la xakameeyo caadifadaha dadkooda. iyaga u ogolaanaya in ay sii haystaan ​​aaladda wax ka mid ah Cadaadiska hoose ee hirka Joogta. (st.126-130, 317-330 UKRF; st.181-189 UKRB; Qodobka. 146-156 UKU; Qodobka. 100-220 UKSŞA)
In dhammaan Kacdoonkii la aargoosi lagu hoobtay waa in aanay ku degdegin, sababta oo ah dawladda karin iman karo ee ku anfacaya sida shaqaalaha adeegyada kale; gabi ahaanba laami rajo la'aan waa la dhigi karaa in meelaha dhagan, ama taagan dambeeya mishiinka Warshadda. Haa iyo voobshte: dhimashada – waa mid aad u fudud hab in laga takhaluso.
Dhimashada caalamka waxaa meesha ka cabsi. ku dheehan dadka sida jiirka hoos cabsi albaaka ku. In this, kuwaas oo dhan “podplintusnye mouse” lo 'u dhimanayaan sababtoo ah cabsi.
Ku caawi kuwa dhici, ugu jira dil waajibaadka killers. Taas oo muujinaysa in falalka iyaga u gaar ah, Kuwaasi ma ah masuul ka. ie. ay ku jiraan shaqada ah ee waxqabadka (riix ilko xoolaha), ka dibna – muwaadiniinta caadiga ah (saaxiibo). runta, waayo, fulinta hawlaha ay u yareyn waqti ay bulshada rayidka ah. (Qodobka. 205-222 UKRF; st.285-293 UKRB; 185-235 UKU; 220-250 UKSŞA)
tayada xal wakiilada cajiib ah dadka, la soo jeediyey in kulan aan rasmi ahayn ama miyi, dheeraad ah sida qoob ka ciyaarka ah balanbaalis перед хрюкающими свиньями. Iyo marka ay jirto cid aad la dheesho – ka tagay si ay u sameeyaan oo keliya naftooda, haddii ay tahay macquul in la sameeyo.
Dambiilayaasha qabtay awoodda haysato dareenka lama filaan ah sida, in aan diyaar u yihiin in mar kale iyo mar kale ku celinayaa waayo-aragnimo ah, qaban carshiga iyo inta uu ka dhalanaya. Haddii waqti guddiga uu dhamaado – duulay gelinaya oo dhan la xaday dadweynaha lacag, si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa ee dad oo dhan suurto gal. Ka dib oo dhan,, “maalinta lama huraan ah xisaab sugnaaday!” (Qodobka. 205-222 UKRF; st.285-293 UKRB; 185-235 UKU; 220-250 UKSŞA)
Laakiin mararka qaarkood dib u siyaasadda. Sababta oo ah waxa fadhiidka ah ee keentay cuna Qarni. mustaqbalka iman mayso, iyo “grand” sano ee la soo dhaafay ku saabsan 20 (iyo wax ka badan) dib xukunka joogo.
rabitaan waalan inay sii filaan ah qabsaday xoog Waxa ay keenaysaa in ay muddo dheer ama, xataa, fadhiidka ah millennial. dhammaadka lahayn awood xasuuqii dadka ku dagaalamaan darafyadiisa “Addoon gaajaysanna Ruble”. (363-360, 105-157 UKRF; st.122-204 UKRB; Qodobka. 436-447, 328-354 UKU, Qaybta. 18, Qodobka. 200-250, 735-814 UKSŞA )
In times qasan, colka gobolka, sidoo kale, waa heegan iyo diyaar u ah inay weeraraan dadka diciif waqti fiican, gaar ahaan haddii dalka waa hodan. dalalka hodanka badan samayn cadaawayaashiinna: oo aan taajir qof kasta.
Maadaama uu hami waalan oo ka mid ah maskaxda ka jirran, qabtay carshiga, dabeecadda on Geeri meeraha ugu danbeyn leexdo xagga qashinka ama cidlada bidaarta. (Qodobka. 246-262 UKRF; Qodobka. 263-284 UKRB, Qodobka. 236-254 UKU, “dembiyada deegaanka” UKSŞA )
Haddii, si kastaba ha ahaatee, on meerayaasha sida bixitaankii qof, si ay u bixiyaan caawin – degaanka “potentates” degdegay in ay iyaga oo dhan rabto “farxad dumo”. Laakiin waxa uu yahay iyo bayaan ma sharxi karaan, malaha, maxaa yeelay,, dhismayaasha noocan oo kale ah ee la xidhiidha hamiday iyo xoogga, waa qalbigiisuna saas u qaali ah “Kashchei dhiman”, taas oo ah sababta ugu sharaxaad aad looga dhawaajiyo baaba'aan.
Laakiin haddii ay ku riyoodaa in ku saabsan – ka dibna aad u baahan tahay in ay ogaadaan riyooyinkooda iyo in la abuuro a boqortooyada jannada iyo dhulka: meeraha kasta (iyo waxyaabaha ay) Waxaa gaar loo leeyahay Cosmos koobi karayn (waxa loo arki karaa oo cirka jooga), isku dayaysa in ay ku xad xuquuqda hantida gaarka loo leeyahay waxaa eryadeen tan iyo sharciga khayaalka. (Qodobka. 158-204 UKRF; Qodobka. 205-262 UKRB; UCU st.185-198; ca. st.221-224.14. UKSŞA)
Haddii qof caadi ah sababtoo ah cadaadis siyaasadeed lahaa dareen rajo la'aan – this wuxu laga yaabaa in shil ama masiibo, taas oo bilaabaha waa rajo eed. (Qodobka. 109-122 UKRF; Qodobka. 144-158 UKRB; 119-133 UKU; 200-227 UKSŞA)
maamulka Regulatory si joogto ah u isticmaalaan warbaahinta macluumaad (raadiyaha iyo telefishinka dadweynaha) farriimaha spam maalin iyo daandaansi. Oo “potentates” waxa oo dhan ku kici free, oo tartamaya, xitaa lacag kuma filna. ( ( ( ) ) ) (st.232-234 UKRB, Qodobka. 171, 173 UKRF,Qodobka. 190,192 UKU, Qodobka. 223-228 UKSŞA)
siyaasadda doorashada madow raaxaystaan ​​Ka dib markii si cad u sameeyo go'aamo kala duwan, taas oo la xidhiidha in dhammaan dadka deggan iyo, xataa, kuwii iyaga ma siin xaq u leeyahay inuu sameeyo go'aannada. wax mudan muwaadin xaaladan oo kale weydiin kartaa: “Yaa waa idinka oo dhan si? Oo cabsi waxaad u soo qori ii “sharciyada” oo aan iga fasax?”
In dhamaadka, mana karayaan iyo duping dadweynaha adduunka waxaa gabi ahaanba la burburiyay Dhimashada, eegno dilaaga for kala duwan a a meeraha, ku haboon ay baabba 'gaabiyaa by qiimaha been ah ama giijisan ee Itobiya. (Qodobka. 159, 285-330 UKRF; Qodobka 209, 356-387 UKRB; 190,192,109-114,328-447 UKU, 220-250, 720-814 UKSŞA )
===Iyada oo Glass Raadinta ee===
On halis meeraha hoos dulmi joogta ah, geeridu waa malo ah, in World ka soo horjeeda (meeraha nolosha) Waxaa meel waa in Ihmemaa. Waxaa laga yaabaa in uu jiro dulmi of Life, iyo dadka u farxad dabooshay. Ka dib oo dhan, haddii on hal gacan waxa xun – laga yaabaa xataa wax kasta oo ka soo horjeeda waa wanaagsan? Dad badan oo degaan oo ka mid ah meerayaasha isku dayaan in ay ka cabsi ka baaxad weyn ka baxsadaan ugu yaraan meel.
On meeraha la qurux badan, si fiican u labisan iyo agoonta iyo sidoo kale maal-galiso ku faraxsanayn wax kasta oo, xataa, Carruurta ku jirta, kuwaas oo carruurta u qurux badan. guryaha. Ka dib oo dhan, haddii nolosha nidaamka la qotomiyey xurmayn – carruurta aan doonaynin in la khasbay in ay ku sugan goobaha sida. Oo haddii “ma siin” – in wada noolaanshaha waxaa adag: badan ka adag yahay malax dajinaya majarafad.
©©© Dhaqaalaha ©©©
Haddii aad u suurtagashay in ay la dhashay on meeraha dhimashada ee dalka saboolka ah – aad qaddar ka dhigi doonaa oo kaliya u nixin iyo naxariis.
Ilaa iyo inta aad aaminsan tahay in wanaagga iyo caddaalad nischebarony weecin doono oo dhan oo idinka mid ah “Casiir” ku andacoonaya of sort qaar ka mid ah uunu teori. Oo markii mid idinka mid ah waxay yeelan doonaan brojektikani – waxay sheegi doonaan: “Oo maxaad ku fikireysay: hit sheeko cirfiid a?”
In sida “cirfiid” wadamada dhaqaalaha waa mid aad u fudud:
1) Miisaaniyadda dalka ee uu ka kooban yahay dadka lacagta bixiyay.
2) Miisaaniyadda dalka ee uu ka kooban yahay lacag, aan ku baxay caafimaadka caawin.
3) Miisaaniyadda dalka ee uu ka kooban yahay hawlgabka, taas ma ku nool yihiin ilaa addoommo ah(muwaadiniinta) gobolka.
formula Dhaqaalaha waa mid aad u fudud:
- Waxaad arki on wadada madhan 100 kun. hawlgabka ah iyo 200 oo kun oo. bukaanka isbitaalka aan la dhisay?
- No. Ma arko.
- Laakiin lacag, nahay inaynu ku badbaadi, waannu nool.
In dalalka saboolka ah waxaa la aqbalay in uu u shaqeeyo fikrad, maxaa yeelay, way adag tahay in la helo marmarsiinyo kale. Sida caadiga ah, fikrad noocaas ah waa afka baarkiisa “mustaqbalka wanaagsan oo dhalaalaya” Sida laga soo xigtay slaveholder ah. In kasta oo si gaar ah u sharax waxa ay tahay waxa ay si fudud ma aha ciidamada, waayo, isaga qudhiisu isagu garan maayo. Xaaladaha noocaas ah, uu ka jecel yahay inuu ku doodo ku saabsan, waa qarsoodi gobolka. Laakiin haddii ay jiraan fikrado dheeraad ah oo dhalaalaya – walwalsan tahay, waayo, isaga leh addoon carshiga si dhaqso ah si ay u fahmaan fikrad cusub, in garasho ka hor intii uusan reebtay tartan. Xaadirka ah ee rays ifka iftiinka iftiimeen isagoo dhoolacadeynaya nooc, wuxuu uun weydiisan kartaa: “Ma noo sheegi kartaa in ka badan oo ku saabsan fikradda? Ka dib oo dhan, waxaan ahay milkiilaha adoonka ugu caqliga iyo nooca: Waxaan fahamsanahay doonaa wax walba oo. Laakiin isku day in aad u sheegto si, IA awoodaan si ay u sharxaan iyada si, oo aan fahmi this.” (Oo markan waxaa timaada cayn kasta oo iftiin dabiici ahayn.)
ugu fiican muwaadiniinta dalalka sida – waxay, sheeganeysa in: “I 40 sano istaagay for mishiinka, waxaana doonayaa, carruurta aan isla kuwaas waxay ahaayeen sidii aan samayn!”
In dalka ka mid ah dadka saboolka ah oo dhan shaqo ee fikradda, weheliyay ballamada ku saabsan, in: “ka dibna, maalin maalmaha aan waxaad ka heli doontaa wax Mudanayaal(oo aad u badan)” , waayo, ninna waxaa laga sugayaa in uu bixiyo. (Qodobka. 159 UKRF; Qodobka. 209 UKRB, UCU st.190; razd.18 UKSSHA)
in, madadaalo inuu boqor noqdo in “dalka nacasyada”. Ka dib oo dhan, haddii ay jirto sabab ay ku faanaan ay “boqortooyadiisii ​​digir”, iyo smart oo kaliya ma doonayaan in ay u dagaalamaan “carshiga digir”, maxaa yeelay, sida qof caaqil ah laguma jirrabo by rajada in ay nacas ugu fiican.
Haddii “dalka mouse”, in “meeshu eyda” sameeyay “doorashooyinka dowladda” – doorasho walba waxaa loo dejiyay. Maxaa yeelay, xaq u leeyahay inuu codeeyo waa kaliya in ciidankii lacag, iyo inta kale oo kaliya xaq u leeyahay inuu codeeyo qaabka guud ee ay leeyihiin, oo u oggolaan lacag. In si kale loo dhigo, xaaladahan oo kale, waxaa la ogol yahay in ay addoomo kaliya “calafka madfac” field “dagaalo” characters macmal ah la wielder, xoog iyo lacag soo giringiriyey mid. (Oo meesha u egtahay oo kaliya Guddiga Antimonopoly?) (st.110,158-180 UKRF; st.145-146,205-250 UKRB, Qodobka. 120,185-198 UKU; st.210.5, 221-224.14 ca.. UKSŞA )
1) Qoryaha iyo xunxunna ciidan, kulane – waa furaha in ay awood.
2) xoog – waxa uu ka hadlayaa, siyaasadda iyo lacag.
3) lacag – Waa rahaamad shaki xorriyadda, tusinayaa permissiveness.
In si kale loo dhigo, lacag – waa hub la mid ah ku xusan cutubka 1aad, oo keliya ka yar dareemi iyo guud, laakiin si ka badan naxdinta (in gacmaha baandada).
Haddaba wax qarsoon. qabaa: haddii aad awood u leeyihiin inay ilaaliyo sharciga khayaalka – idinku ciqaabi karaa sida sharcigu leeyahay, kii xoog weyn abuurtay aad badan? Haddii aanu jirin – ka dibna aad caadiga ah oosa, repïtter, “Snivel” ama “calafka madfac”. Haddii aad, isagoo ugu awoodda sharciga khayaalka iyo xujo, wax aad sameyn karto dambiilayaasha sar sare – ka dibna aad tahay oo kaliya meel madhan, hana aad leedahay.
qarsoodiga kale. Intee in leeg ayaad u ogaato oo ku saabsan shakhsiyaad? max. – laba kun, iyo ugu iyaga ka mid ah – dadka TV. Iyo sababta ay lagama maarmaan tahay? Iyo in aad noloshaada wax iska beddeleen, haddii aadan mana garan, oo aad dadka inta aad sida?
Dhimashada caalamka ka badan waqtiga sameysmi karaa dawlad, siday ay khatar ku tahay jiritaanka Planet oo dhan. Sababtan awgeed, unit oo dhan ciidamada siyaasadeed ee looga baahan yahay si uu tijaabada VCT in meel Clinic.
Oo. Dhimashada caalamka sida oo dhan u taliya qurmay “duračkov” in la wado ee “Networking bulshada”. marka hore – waxay u muuqataa tomfoolery iyo soo ururinta xogta shakhsiga, laakiin markii calooshooda bilaabaan inay jebiyaan jidka proctology – obdiralovka users hore u helo qaab kulul. Oo “caarada”, Zamani bulshada oo dhan in ay u gaar ah “network” qoslaan iyaga sida ay ka farxin. tusaale ahaan, block raxan raxan u uchotki isticmaala oo waxaad ku tidhaahdaan, inay baaqi impressiveness iyo muhiimadda ay leedahay: “ma Waxaad naga siiyo lambarkaaga telefoonka gacanta… hadal degdeg ah! Iyo in meesha laga saaro doonaa profile for spam, in aadan soo diri!” Oo xanibeen profiles, passwords taas oo aan suurogal tahay in khawano, iyo milkiilayaasha profiles, kuwaas oo ah kuwa dhawrsada, in aadan awoodin in aad iftiimin passwords ay. (st.158,159,161-165,168,272-274 UKRF; st.205,206,208-210,212,257,349-355 UKRB; Qodobka. 185,186,189,190 361-367 UKU; st.212.2,223,224, qaybta 18, uumi. 1029, 1030 iyo 1362 ca.. UKSŞA )
Sida laga soo xigtay MMI kasta oo qaab dalka waxaa waajib ku ah inay ka qayb qaataan fulinta sharciyada iyo meelaynta of dambiilayaasha in hay'adaha bulshada go'doonsan. In case of failure yahay hawlihiisa u gaarka ah la siiyo ee article xeerka ciqaabta, kuwaas oo samayn artist la mid ah sida ay dembiilaha iyo dembiilaha ama laahi Xuseen.
Oh, Ciise, waxaana dambiyadaasi laga soo sameeyey ka soo top ugu wanaagsan ee maxaliga ah “quduuska”, koobanahay sharciyada iyaga u gaar ah. Sida aad qiyaasi kartaa: tani waa ku filan, inay soo galaan ciidamada Planet.
~~~ ~~~ Bayaanka
Cosmos waa in ay adkaan Harmony.
PS. Ha iloobin, in Lacanadda aan la baajiyay.
maamulka Machadka tirsan Isbahysiga cadaawayaashaydii oo dhan ay ka iman karta laami ah kalsoonaan karo, Cosmos sidoo kale Isbahysiga oo dhan cadaawayaashiisa Absolutely.
PPS. Mawduuca ku ahaa muddo dheer, oo waxaa lagu disconcerted by, in aan la hayeyna karaa – sidaas daraaddeed waxaan door bidayaa in aan kala tagno dhowr qaybood.
~~~ ~~~ qabaa wanaagsan
Если бы Мы с Вами, Space dhammaadka lahayn, сам Абсолют и Великое Ничто небыли бы заинтересованы в том, что происходит сейчас, на всё то, на что мы смотрим как на нечто ужасное, убогое и коварное, на «мировое правительство», скрытые войны, травление населения химиотрассами, гмо и многим другим, что с виду кажется несправедливым по отношению ко всем нам, этого бы просто не было. И никто из Богов, Space dhammaadka lahayn, сам Абсолют и Великое Ничто не щёлкнут в пальцы и Мы завтра не проснёмся свободными от влияния всего этого, это просто напросто не в их компетенции, именно МЫ с Вами, являясь не творимым «творением», неотъемлемой частью Абсолюта и всего остального, Сами попросили на Себе испытать всё это, и только в нашей компетенции прекратить всё это, и наступает момент когда мы начинаем это осознавать…